၂၀၂၀ နှစ် အလယ်ပိုင်း ကစလို့ ကံကောင်းခြင်းတွေ ကြုံရမယ့် ရာသီခွင် (၅) ခု…။ – Let Pan Daily
၂၀၂၀ နှစ် အလယ်ပိုင်း ကစလို့ ကံကောင်းခြင်းတွေ ကြုံရမယ့် ရာသီခွင် (၅) ခု…။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ကံကောင်းခြင်း၊ ကံဆိုးခြင်း ဆိုတာ သူ့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ လုပ်ရပ်တို့နဲ့တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်နေတာပါ။ စိတ်ထားကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကင်ပေါ်က နက္ခတ်ဂြိုဟ်ခွင် လွှမ်းမိုးမှုအပြောင်းအလဲတွေက မိမိရဲ့ရာသီခွင်မှာ အပြောင်းအလဲ ကိုဖြစ်စေပြီး ကံအကောင်း၊ အဆိုး ကိုသက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ နက္ခတ်ပညာရှင်တွေ နဲ့ တွက်ချက်မှုတွေအရ အခုနှစ် ၂၀၂၀ အလယ်ပိုင်းမှာ ကံကောင်းလာတဲ့ရာသီခွင်တွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ….
သိဟ်ရာသီဖွား (July 23 – August 22)
အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ အခွင့်အလမ်းတွေနည်းတဲ့ အခုလို အချိန်မှာ အလုပ်ကံကောင်းတာကတော့ သိဟ်ရာသီဖွားတွေပါ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် အပြည့်အဝအောင်မြင်မှုရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကံကောင်းပြီးသားဖြစ်နေတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယုံကြည်မှုရှိနေဖို့ ပိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓနုရာသီဖွား (November 23 – December 21)
နဂိုက လွတ်လပ်ပြီးရဲရင့်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့ ဓနုရာသီဖွားတွေက ဒီအချိန် ကစလို့ ကံကောင်းခြင်းတွေ ကို ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ စွန့်စားတတ်တဲ့အကျင့်က ကံကောင်းမှုတွေကို ဖြစ်စေမှာမို့ စွန့်စားရမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့။ ဘာမဆို နောက်မတွန့်ဘဲဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်လိုက်ပါ။ အပြည့်အဝအောင်မြင် ပါလိမ့်မယ်။
ကန်ရာသီဖွား (August 23 – September 22)
နှစ်အစမှာ အဆင်မပြေမှုတွေကြုံ ရပေမယ့် နှစ်အလယ် ကစလို့ တဖြည်းဖြည်းကံကောင်းလာမှာကတော့ ကန်ရာသီဖွားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ၊ ကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံရနိုင်ပြီး အဲ့ဒီကနေ ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေ၊ ကံကောင်းခြင်းတွေ ကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား (October 23 – November 22)
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတွေက မတည်ငြိမ်တဲ့အချစ်ရေး အဆုံးသတ်ပြီး အမြဲတမ်းတောင့် တနေခဲ့တဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အချစ်ရေးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်အချစ်ရေးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်မှာမို့ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတွေအတွက် အချစ်ရေးကံအလွန်ကောင်းမယ့် အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိန်ရာသီဖွား (February 19 – March 20)
မိန်ရာသီဖွားတွေကတော့ အမြဲတမ်းတသမတ်တည်းဖြစ်နေတဲ့ ဘဝအခြေအနေကနေ ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးနဲ့ကြုံရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ comfort zone ထဲကနေ ရုန်းထွက်ပြီး အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတွေ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ လက်မလွှတ်စေဖို့ အမြဲတမ်းသတိ နဲ့နေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
လူတဈယောကျရဲ့ကံကောငျးခွငျး၊ ကံဆိုးခွငျး ဆိုတာ သူ့ရဲ့ စိတျဓာတျ၊ လုပျရပျတို့နဲ့တိုကျရိုကျ သကျဆိုငျနတောပါ။ စိတျထားကောငျးရငျကံကောငျးမယျဆိုတဲ့စကားအတိုငျးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကောငျးကငျပျေါက နက်ခတျဂွိုဟျခှငျ လှမျးမိုးမှုအပွောငျးအလဲတှကေ မိမိရဲ့ရာသီခှငျမှာ အပွောငျးအလဲ ကိုဖွဈစပွေီး ကံအကောငျး၊ အဆိုး ကိုသကျရောကျမှုဖွဈစပေါတယျ။ နက်ခတျပညာရှငျတှေ နဲ့ တှကျခကျြမှုတှအေရ အခုနှဈ ၂၀၂၀ အလယျပိုငျးမှာ ကံကောငျးလာတဲ့ရာသီခှငျတှရှေိပါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတော့ ….
သိဟျရာသီဖှား (July 23 – August 22)
အလုပျအကိုငျနဲ့ပတျသကျလို့ အခှငျ့အလမျးတှနေညျးတဲ့ အခုလို အခြိနျမှာ အလုပျကံကောငျးတာကတော့ သိဟျရာသီဖှားတှပေါ။ ကိုယျလုပျခငျြတာကို ယုံကွညျမှုရှိရှိနဲ့ကွိုးစားမယျဆိုရငျ အပွညျ့အဝအောငျမွငျမှုရမယျ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ အလုပျအကိုငျနဲ့ပတျသကျလို့ ကံကောငျးပွီးသားဖွဈနတောကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယုံကွညျမှုရှိနဖေို့ ပိုအရေးကွီးတဲ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။
ဓနုရာသီဖှား (November 23 – December 21)
နဂိုက လှတျလပျပွီးရဲရငျ့တဲ့သဘာဝရှိတဲ့ ဓနုရာသီဖှားတှကေ ဒီအခြိနျ ကစလို့ ကံကောငျးခွငျးတှေ ကို ကွုံတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ စှနျ့စားတတျတဲ့အကငျြ့က ကံကောငျးမှုတှကေို ဖွဈစမှောမို့ စှနျ့စားရမှာကိုမကွောကျပါနဲ့။ ဘာမဆို နောကျမတှနျ့ဘဲဆုံးဖွတျပွီး လုပျလိုကျပါ။ အပွညျ့အဝအောငျမွငျ ပါလိမျ့မယျ။
ကနျရာသီဖှား (August 23 – September 22)
နှဈအစမှာ အဆငျမပွမှေုတှကွေုံ ရပမေယျ့ နှဈအလယျ ကစလို့ တဖွညျးဖွညျးကံကောငျးလာမှာကတော့ ကနျရာသီဖှားတှဖွေဈပါတယျ။ အဆကျအသှယျကောငျးတှေ၊ ကိုယျ့ကိုကောငျးကြိုးဖွဈစမေယျ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့တှဆေုံ့ရနိုငျပွီး အဲ့ဒီကနေ ကောငျးတဲ့ပွောငျးလဲခွငျးတှေ၊ ကံကောငျးခွငျးတှေ ကို ဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
ဗွိစ်ဆာရာသီဖှား (October 23 – November 22)
ဗွိစ်ဆာရာသီဖှားတှကေ မတညျငွိမျတဲ့အခဈြရေး အဆုံးသတျပွီး အမွဲတမျးတောငျ့ တနခေဲ့တဲ့ တညျငွိမျအေးခမျြးတဲ့အခဈြရေးမြိုးကို ပိုငျဆိုငျရမယျ့အခြိနျပဲဖွဈပါတယျ။ စိတျခမျြးမွဖှေ့ယျအခဈြရေးမြိုးကို ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရနိုငျမှာမို့ ဗွိစ်ဆာရာသီဖှားတှအေတှကျ အခဈြရေးကံအလှနျကောငျးမယျ့ အခြိနျပဲဖွဈပါတယျ။
မိနျရာသီဖှား (February 19 – March 20)
မိနျရာသီဖှားတှကေတော့ အမွဲတမျးတသမတျတညျးဖွဈနတေဲ့ ဘဝအခွအေနကေနေ ထူးခွားတဲ့ပွောငျးလဲမှုမြိုးနဲ့ကွုံရမယျ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။ comfort zone ထဲကနေ ရုနျးထှကျပွီး အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးကို ရှာဖှတှေရှေိ့နိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေးတှေ ရောကျလာပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ အခှငျ့အလမျးကောငျးတှေ လကျမလှတျစဖေို့ အမွဲတမျးသတိ နဲ့နဖေို့လိုပါလိမျ့မယျ။
ယောကျြား တဈယောကျ ရဲ့ တလှဲ မာနနှငျ့ မိနျးမ တဈယောကျရဲ့ “မပှငျ့လငျးမှု”
ခဏခဏ သန့်ရှင်းရေး မပြု လုပ်သင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အစိတ် အပိုင်း (၆) နေရာ… (အရေးကြီးလို့ မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်)
တစ်ရက် ကို ငှက်ပျောသီး (၃)လုံး စားပေးခြင်း ဖြင့် ရရှိမည့် တန်ဖိုးရှိ လှတဲ့ အကျိူး ကျေးဇူးများ